Ciidanka Badda Puntland iyo Burcad-Badeed dagaal ku dhexmaray gobolka Mudug. – Radio Daljir
Diseembar 11, 2012 8:36 b 0
Garacad, Dec 11, Ciidamada Bilayska Badda ee Puntland ayaa iska hor-imaad ku dhexmaray deegaano hoostaga degmadda Garacad ee gobolka Mudug, kadib markii ciidamadu shalay halkaasi gaareen.
Hal qof oo Burcad-badeed ah ayaa dhaawacmay 4 kalena gacanta ayaa lagu dhigay sida uu Radio Daljir u sheegay gudoomiyaha degmada Jariiban oo garac hoostagto Md Cabdikariin Sh Maxamuud Kaytoon.
Mudane Kaytoon wuxuu sheegay in ciidamada Badda ee Dawlada Puntland ay weerar ku qaadeen goob lagu tuhunsanaa inay ku jiraan kooxo Burcad-Badeed ah oo Markab ku haysta Xeebaha Garacad ee gobolka Mudug.
Wuxuu sheegay in hawlgalkani u dhacay si wanaagsan oo aan waxyeelo kasoo gaarin dadka deegaanka sida uu hadalka u dhigay.
Ciidamada Bilayska Badda ee Dawlada Puntland ayaa mudooyinkii danbe wadey ololaha ciribtirka Burcad-Badeedda ee deegaanada Puntland iyadoo isbedel weyn la dareemay mudadii ay Ciidamadaasi shaqaynayeeen.